'Maatiin guddifachaa fudhatu akka dhala keenyaatti guddisna jechuun waadaa seenu' - BBC News Afaan Oromoo
'Maatiin guddifachaa fudhatu akka dhala keenyaatti guddisna jechuun waadaa seenu'
Image copyright Zinabu Tunu
Goodayyaa suuraa Manni Murtii Sdarkaa Tokkoffaa Federaalaa gaaffii guddifachaa Giiftii Duree Zinnaash Taayyaachaw fudhateera
Oromoon guddifachaa dabalatee sirnoota garaa garaan daa'ima hin godhanne ofitti qabee guddisa.
Torban darbe Giftii dureen Aadde Zinnaash Taayyaachaw mana murtii dhaqanii daa'ima guddisuuf jedhan bu'uura seeraa akka qabu taasisaniiru.
Namoonni hedduun garuu daa'ima kan isaanii hin taane guddisuu malee mana murtii dhaqanii bu'uura seeraa akka qabaatu hin taasisan.
Dhimma guddifannaa aadaa Oromoo keessa jiruufi adeemsa seera barbaachisoo tahan ilaalchisee BBC'n ogeessota dubbiseera.
Uummatni Oromoo sirna guddifachaan waggoota dheeraaf beekama. Kunis adeemsa ofii qaba, gosi garaa garaas ni jira. Dr Firdiisaa Jabeessaaa, Yunivarsiitii Finfinnetti qorataafi barsiisaa dha.
'' Ofitti makuu, Oromsuus jedhama yoo saba biraadha illee tahe. Guddifachaas jedhu, moggaasnis sanuma waliin wal fakkata. Hammachiisanis sanuma keessa, daara baasuus jedhama bakka adda addaatti garaagaradha malee'' jedhan.
Akka guddifachaatti maatiin dhala keenya haa ta'u jedhani fudhatan akka dhala isaanitit ilaaluuf waadaa seenu. Kuni dhaalalllee dabalata.
Dr Firdiisaan ''nuyi kana daa'ima godhachuu barbaanne, guddisuu barbaanne, dhala keenya irraa adda hin baasnu, yoo duune nu awwaala, daba nutti hin yaadu jedhanii waadaa wal galchu''jedhan.
Itoophiyaan guddifachaa biyya alaa dhorkite
Mucaan guddifachaa, hayyuu beekamaa har'aa
Gaafa Sambata darbe haati warraa Ministira Muummee Aadde Zinnaash Taayyaachaw daa'ima miiliyoon jedhamu guddisuuf isa fudhatan bu'uura seeraa akka qabaatu taasisaniiru.
Kana jechuun ammaan achi mucaan kuni kan isaaniidha jechuudha. Ministira Mummee Abiy Ahimadittis waamama.
Karaa seera hordofeen mucaa fudhatan guddisuuf duraan dursa fedhiin maatii baramuu qaba. Yoo dhaabbatatu guddisa ta'emmoo dhaabbatichi fi kanneen guddisuuf jedhan waliin waligaltee raawwachuu qabu.
Ergasii dhimmi gara mana murtii dhaqa. Ogeessaafi barsiisaa Seeraa Bisrat Teklu jalqaba waligalteen taasifamuu qaba.
Walii galtee guddifachaa kanas yoo maatitu guddisu ta'e lamaanuu mallatteessuu qabu jedhan.
Akkasumas namootni guddisna jedhan umuriin isaaniis waggaa 25 ol ta'u qaba jedhan.
''Yoo dhaabbatatu kenna tahe ammoo dhaabni guddifachaa kennus bakka bu'aa isaatin mallatteessuu qaba.
Dabalataanis, kanneen guddisuuf jedhanis daa'imni fayyaa qabaachuu isaaf ragaan dhihaachuu qaba. Ragaan dhalootaa daa'imallee barbaachisa. Maatiin yakkarraa bilisa ta'u isaanii, guddisuuf humna qabaachuu isaanii mirkanaa'uu qaba,'' jedhan ogeessi seeraa kun.
Manni murtiis yoo guddina daa'imaaf mijataa tahuu isaa itti amane osoo hin tursiin ni murtaa'a jedhan.
''Osoo jijjiiramni kuni dhufuu baatee anis mana hidhaatii hin hiikamu''
Haa tahu malee Kana gidduutti adeemsonni keessa darbuun barbaachisan akka jiranis himaniiru.
Erga kuni hundi xumurameefi seera duratti murtaa'ee booda daa'imni guddisaaf fudhatame mirga dhaaluu ni qabaata.
Kana jechuun immoo akka aadaa Oromootti dhalchanif ykn dahaniif qofa osoo hin taane guddisaniifis abbaa ta'u jedhan hayyuun antiropolojii Dr Gammachuu Magarsaas.
''Guddifachaa inni jedhan sun maqumaaf jedhu malee erga guddistee ati abbaadhuma, ijoollee ati gudifatee fi manatti godhatte gidduu garaagarummaan hin jiru. Abbaa immoo kan si taasisu waan sirraa eegamu sana gootudha''
Waggaa darbe Itoophiyaan namoota alaa dhufanii daa'imman Itoophiyaatii fuudhanii guddisan dhorkiteetti.
Jarri biyya keessa guddisuuf fudhatan garuu yoo xiqqoo ta'e malee hedduun isaanii bu'uura seeraa akka qabaatu hin taasisan jedhu Yunivarsiitii Finfinnetti barsiisaan barrnoota social work Dr Ashannaafi Hagoos.
Wanti Giftiin Duree taasisan immoo dhaabbileen biyya keessa daa'imman guddisuf hojjetan xiqqoofi cimina illee waan hin qabnef ummanni akka guddifatu fakkeenya ta'uufi.
Haa ta'u malee, kuni rakkisaa ta'u mala jedhu hayyuun kuni.
''Biyya keenya aadaa Oromoon alatti daa'ima guddifachaan fudhate daa'ima kooti jedhee kan amanu harka meeqa ta'a? Ana qixxee mirga qaba, dhala kooti jedhee kan guddisu baay'ee miti. Kana immoo halkan tokkoon jijjiiruun waan danda'amu natti hin fakkaatu.''
Itoophiyaan daa'imman hedduu guddifachaa biyya alaaf kennuun biyyota beekaman keessaa tokko turte.
Mucaan guddifachaaf kenname, waloo fi hoogganaa Yunivarsiitii Maanchistar ta'e
Kitaabni 'Ida'amuu' Ministira Muummee Abiy Ahimad eebbifame